I-Dickinson Cottage - Indawo yasemakhaya enokuthula. - I-Airbnb
I-Dickinson Cottage - Indawo yasemakhaya enokuthula.
Iholide elisanda kulungiswa kabusha eliziqukayo livumela ukuba libe sesimweni esihle sasemaphandleni. Ibekwe phansi kwezintaba zase-Preseli, ngaphakathi kwebanga lokushayela elilula ukuya ezindaweni eziningi ezikhangayo. I-Tenby, iCardigan, i-Haverfordwest, i-Carmarthen nezinye izindawo eziningi ngaphakathi kwemizuzu engama-30 yokushayela. Ugu olumangalisayo, olunamabhishi alo amangalisayo lufinyeleleka kalula. Indawo yasemakhaya isho ukuthi iyindawo ekahle yokubalekela ukuthula nokuthula. Izokwenza futhi isisekelo esihle sokuhlola kokubili i-Pembrokeshire ne-Carmarthenshire.
Ikotishi libekwe ngaphakathi kwezakhiwo ezisohlwini (omanje elilungiswayo) lapho thina (ababungazi) sihlala khona. Inendawo yayo yokupaka yangasese yemoto eyodwa, nendawo yokupaka eyengeziwe etholakalayo. Kukhona i-patio lapho ungaphumuza khona ngengilazi yewayini enhle futhi ujabulele ukubuka kuwo wonke amasimu nehlathi (okwamanje lokhu kwabelwana nabanye abavakashi).
Inkambu engezansi ingasetshenziswa ukuze usebenzise izinja zakho ngokungena endleleni yezinyawo yomphakathi ngesango.
Sicela uqaphele ukuthi ayikho i-WiFi. I-4G iyatholakala.
Sinenhlanhla yokuhlala endaweni enhle yaseWales. Siyindawo yasemakhaya engenabo omakhelwane eduze, sizungezwe amasimu nehlathi. Kunokuhamba okumangalisayo emnyango wethu okuholela ngasemfuleni, ujantshi wesitimela omdala nokuya eCromlech (igumbi lokungcwaba lasendulo). Kuningi ongakubona nokwenza e-Pembrokeshire naseCarmarthenshire, siyajabula ukwenza izincomo.
Sihlala esizeni ngakho ayatholakala isikhathi esiningi. Sithanda ukwamukela izivakashi zethu futhi siqinisekise ukuthi zinakho konke ezikudingayo bese sizivumela ukuba zijabulele ukuhlala kwazo.